Iiyure ezili-18 kukuzimela kwe-Apple Watch Series 3 | Ndisuka mac
Iiyure ze-18 kukuzimela kwe-Apple Watch Series 3
Ukuphehlelelwa kwe-Apple Watch Series 1 kunye ne-2, kubonise utshintsho olubalulekileyo kuhambo lokuzimela kwezi zixhobo, ukusuka kusuku olunye ukuya kwezi zimbini zathi zathiwa luthotho 2, okoko nje singakhange sisebenzise kakhulu i-GPS kunye nayiphi na imisebenzi yomzimba. Kodwa ngokusungulwa kothotho lwesi-3, ngakumbi imodeli ngonxibelelwano lwe-LTE, ukuzimela kuye kwancitshiswa kwakhona kwinto esasinikwa yi-Original Apple Watch: iiyure ezili-18. Nangona kunjalo, imodeli ngaphandle koqhagamshelo lwedatha iyaqhubeka nokusinika iintsuku ezimbini zokuzimela njengangaphambili, Series 2, imodeli erhoxisiweyo kwintengiso.
Kodwa ezi yure zili-18 zinokuncitshiswa kakhulu ukuba sisebenzisa iGPS kunye nokufowuna ngokuka-Apple ngokuzimela kwe-Series 3 sinako: jonga amaxesha angama-90 ukuba sinezaziso, sebenzisa izicelo zemizuzu engama-45, wenze umthambo kangangemizuzu engama-30 ngelixa umamele umculo. Ikwasivumela ukuba senze umnxeba iyure ukusuka kwisixhobo uqobo okanye iiyure ezintathu ukuba siyenza nge-iPhone yethu. Nangona iApple ingakhange iyichaze, kucingelwa ukuba i-chip ye-LTE ye-Apple Watch iyakunqamka ngokuzenzekelayo xa ixhunywe kwi-iPhone, ukuze yonyuse ubomi bebhetri kwaye ingafumani zaziso kunye neefowuni kwizixhobo zombini.
Uthotho 3 lusivumela ukuba senze iiseshini zokuzilolonga iiyure ezili-10. Kodwa ukuba sibaleka ngeGPS iyasebenza, Ukuzimela kuncitshisiwe ukuya kwiiyure ezingama-4. Ixesha lokutshaja i-80% yebhetri ye-Apple Watch Series 3 yiyure enesiqingatha kunye neshaja yoqobo, kodwa ukuba siyayifuna kuya kufuneka silinde iiyure ezimbini. Imodeli enonxibelelwano lwe-LTE okwangoku ayifumaneki ukuze ibekwe eSpain, enokuthi ibonise ukuba ngabasebenzisi ngokwabo ekufuneka babonelele ngesisombululo kumdibaniso womsebenzisi. E-United States, abaqhubi banikezela ngesicwangciso sedatha esongezelelweyo semodeli ethile enexabiso le- $ 10 ngenyanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iiyure ze-18 kukuzimela kwe-Apple Watch Series 3
Esi sisibhengezo sokuqala seApple Watch Series 3